Business Plan ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ
Business Plan ဆိုတာ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာ ပလာ လက်နက် တစ်ခုပါပဲ။
ကောင်းမွန်တဲ့ A good Business Plan တစ်ခုဆိုတာ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကူး စိတ်သန်း (Business Idea) ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန် အတွက် လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံစူးစိုက် လုပ်ဆောင်ဖိုရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရုံ သာ မကပဲ၊ရေတိုရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြည့်မှီရန် အထောက်အကူပြုဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
1.အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းဟာ ကျဆုံးဖို့ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက် နေသလိုပါပဲတဲ့...(Benjamin Franklin)
Silicon Valley ကိုတည်ထောင်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ် Venture Capitalist တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သူ Eugene Kleiner ကပြောဖူးတယ်၊ Business Plan တစ်ခုကို ဆွဲဖို့စလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စည်းစားပုံတွေကို စည်းကမ်းတကျ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမယ့် အရာ တွေကို စေညွန်လိုက်တာ ပါပဲတဲ့...
စိတ်ကူးတစ်ခုဟာ အရမ်း ကောင်းနေနိုင်ပေမယ့် တကယ် အစီအစဉ် ဆွဲကြည့်ပြီး အသေးစိတ် တွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါကျမှလက်တွေ့ မြေပြင်အနေအထားနဲ့အလှမ်းကွာနေနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ် တယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွက် Business Plan ဟာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပေ မယ့် စွန့်ဦးတီထွင်သူ တော်တော်များများကတော့ လိုအပ်တယ် မထင်ကြပါဘူး
လုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများ ကတော့ ကိုယ်လုပ်မယ်. အစီအစဉ်တွေကို အသေအချာချရေးထား ကြဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတက် ကြပါတယ်
တကယ်တော့ Business Plan ဆိုတာသက်မဲ့တစ်ခု ဖြစ်တယ်လက်တွေ့နဲ့ဆက်စပ်မှု နည်း တယ်လို့တော်တော်များများကပြောကြတယ်၊ လူတိုင်းတော့ ဒီအတွေးမျိုးကို လက်မခံပါဘူး အရင်းအနှီးရှာရာမှာ အကြံပေးတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ တော်တော်များကတော့ Business Idea ရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြောကြတယ်...
အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea တစ်ခုတောင်မှလက်တွေ့စနစ်တကျပုံစံချပြီး အကောင်အထည်မဖော် နိုင်ရင် အာလဟဿ ဖြစ်သွားတက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေဖြင့် ဘဏ်တို့၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတို့ ဆီမှ ငွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Business Plan တစ်ခုဟာ အတိုင်းထက်အလွန် အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
သင့်ရဲ့ Business Plan ကတော့ တကယ့် အထောက်အထားတွေနဲ့ ကြည့်ရတာ နားလည်လွယ်ဖို့၊ ရှင်းလင်းဖို့၊ ဖတ်ရတာလွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
2. Business Plan တစ်ခုရေးတဲ့အခါ အဓိက ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမယ့် အချက် (၂) ခုရှိတယ်...
ကိုယ့်ရဲ့ Business Plan ကိုဖတ်မယ့်သူ Reader ကိုသေချာသိပြီး ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်...
ဥပမာ သင်ဟာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ Investor ဆီက ရင်းနှီးငွေရှာမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Potential investor ဟာ Reader ဖြစ်မှာမို့ သူတို့ကို ဦးတည်ရေးဖို့ပါပဲ။တကယ်လို့ Joint Venture Partner ရှာမယ်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ Potential Partner ဟာ Reader ဖြစ်မှာမို့ သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ Business Plan ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
သင့်ရဲ့ Plan ကိုဖတ်ပြီးရင် သူတို့ဆီက ဘယ်လို တုံ့ပြန်မှု (Respond) မျိုးကို ရချင်သလဲဆိုတဲ့ သတင်းစကား အရိပ်အမြွတ် (Message) ကို အသေအချာ ဖော်ညွန်းပါရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။Business Plan ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာကို အမေရိကန် Management Consultant တစ်ဦးဖြစ်သူ Peter F. Drucker ကအောက်ပါအတိုင်း ညွန်းဆိုထားပါတယ်
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဂတိဂဝတ်တွေ၊ မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ လက်တွေ့မဆန်သော စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက် (Plan) တစ်ခုအောက်မှာ လုံးလည်လိုက်နေကြဦးမှာပါပဲ၊
3. သင့်လုပ်ငန်းမှာ ဤအကြောင်းအရာ (၄) ခုအတွက် Business Plan လိုပါတယ်
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးတိုးမြင့်ရှာဖွေရန်၊ အရင်းအနှီးရရန် အလားအလာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊ငွေကြေးချေးလိုသူများဟာ သင့်လုပ်ငန်းထဲ ငွေကြေးမထည့်ဝင်မှီ သေချာရေးထား တဲ့ Business Plan ကိုကြည့်လိုကြတယ်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း အယူအဆတွေကို ချပြရုံနဲ့ သူတို့ ငွေကြေးကို သင့်လုပ်ငန်းထဲကိုထည့်ဖို့ (သို့) သင့်လုပ်ငန်းကို ငွေကြေးချေးပေးဖို့ မလုံလောက်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း အယူအဆတွေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် လက်တွေ့ကျတဲ့ Business and Financial Plan တစ်ခုကို သေချာလက်တွေ့ကျကျဆွဲပြဖို့လိုတယ်၊သင့်လုပ်ငန်းကိုလက်ရှိ အနေအထား ကနေ ဘယ်အဆင့်ထိ ခေါ်သွားဖို့အတွက် ငွေကြေး ဘယ်လောက် လိုအပ်ကြောင်း၊ အဆိုပါငွေကြေးကိုဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးစွဲသွားမလဲ ဆိုတဲ့ Capex Plan (ငွေလုံးငွေရင်းသုံးစွဲရန် လို အပ်မှု အစီအစဉ်) နဲ့ Opex Plan (နေ့တစ်ဓူ၀ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် သုံးစွဲရန်လိုအပ်မှု အစီအစဉ်) စသည့် Financial Plan ကို အသေအချာ ချပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
2. မှန်ကန်ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း
မှန်ကန်ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ဖို့ပါလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး အနေဖြင့် Business Plan ရှိခြင်းအားဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် စိတ်ကူး စိတ်သန်းများ (Business Idea) များကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမက လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ (Business Strategies) များကို သတ်မှတ်ဖို့ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Business Plan တစ်ခုအနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အာရုံစိုက်ရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှ များနဲ့ ကြိုတင်စီစဉ်မှုများ၊
နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖောက်သည်များအတွက် တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော အရာများကို ဖန်တီးရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့ နေရာများမှာ လွန်စွာ အကျိုးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး အနေဖြင့် Business Plan ရှိ ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အနေဖြင့် ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းချက်ရှိသလဲ ဆိုတာကို သိဖို့ပါ။ အဆိုပါအားနည်းချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုယ့်ကို ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြံ အဉာ
ဏ်တွေ ပေးနိုင်မယ့် အကြံပေး တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ Business Plan ကို ဝေမျှပါ။အဆိုပါ အကြံပေးတွက ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ Business Plan ကို အထောင်အထည်ဖော် ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုငှားရမယ် ဘယ်လိုရှာနိုင်တယ် စသည်ဖြင့် အကြံကောင်းတွေပေးနိုင်ဖို့ များစွာ အထောက်အကူပြု မှာပါ။
4. Business Plan ဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ Idea ကို ချပြရာမှာ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအရင်းအနှီးရှာတဲ့ အခါ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့တွေ၊ငွေချေးမယ့်သူတွေကိုကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အနာဂတ် အစီအစဉ်ကိုချပြရာမှာ ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုး၊ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အလုပ်ဝင်မယ့်သူတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကုန်ကြမ်း ကုန်ချော ရောင်းမယ့်သူတွေ ဆီက အကြွေးဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ဆွဲဆောင်ရာမှာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
Business Plan တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမှာ အတွေးအခေါ်တွေ အများကြီးပါဖို့လိုရာကိုယ်ဘာ လုပ်ချင်တာလဲ ဆိုတဲ့အတွေးသစ်စိတ်ကူးသစ်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီး အစပြုရေးဆွဲဖို့လည်း မလွဲမသွေ လိုပါတယ်။အရမ်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်ဖိုမလိုသော်လည်း၊အခုကိုယ်ကဘယ်မှာရှိနေတာလဲ၊အနာဂတ်မှာကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆို့တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပါဖို့ရယ်နဲ့အဆိုပါစိတ်ကူးစိတ်သန်း တိုင်းဖြစ်လာအောင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ ဆိုတာတွေတော့ ပါဖို့လိုပါတယ်။